नेदरल्याण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक वकिल - Law & More
एक आपराधिक मालिकको आवश्यकता छ? सम्पर्क गर्नुहोस् LAW & MORE
त्यहाँ थुप्रै परिस्थितिहरू छन् जहाँ आपराधिक कानूनले हाम्रो जीवनमा एक भूमिका खेल्दछ। त्यसकारण हामी प्राय: दुर्घटनामा पर्दछौं। उदाहरण को लागी, तपाईले त्यस्तो अवस्थाको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले धेरै रक्सी पिउनु भयो र गाडी चलाउने निर्णय गर्नु भयो। यदि तपाईं रक्सी पनी पछाडि पक्राउ पर्नुभयो भने तपाईंको समस्या छ। यस्तो अवस्थामा तपाईंलाई जरिवाना लिन सकिन्छ वा समन पनि लिन सकिन्छ। अर्को सामान्य अवस्था यो हो कि अज्ञान वा लापरवाहीको कारण, यात्री झोलाहरूमा निषेधित लेखहरू हुन्छन् जुन छुट्टी, सामान वा कोषबाट लिइन्छ जुन गलत संकेत गरीन्छ। कारण जेसुकै होस्, यी कार्यहरूको परिणाम गम्भीर हुन सक्छ, र आपराधिक जरिवाना EUR 8,200 को राशि सम्म जान सक्छ।
एक उद्यमी वा एक कम्पनी को निर्देशक को रूप मा तपाइँ पनि तपाइँको व्यापार स्थिति को परिणाम स्वरूप आपराधिक कानून सामना गर्न सक्नुहुन्छ। यो मामला हुन सक्दछ, सक्षम अधिकारीहरू द्वारा प्रमाणीकरण पछि, तपाईंको कम्पनी ठगी वा असामान्य लेनदेनको शंका हो। साथै, व्यापार विश्वमा भाग लिईएको कारण अनजानमा आर्थिक उल्लंघन वा वातावरणीय कानूनको उल्ल .्घन हुन सक्छ जुन तपाईंको व्यवसायमा लागू हुन सक्छ। त्यस्ता कार्यहरूले तपाईंको कम्पनीको लागि गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ र धेरै उच्च जरिवाना लिन सक्छ। के तपाईं आफूलाई यस प्रकारको अवस्थामा पाउनुहुन्छ वा तपाईंलाई थप जानकारी चाहिन्छ? कृपया आपराधिक वकिललाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् Law & More.
"कुशल कामले मेरो सानो कम्पनीको लागि सस्तो बनायो। म कडा सिफारिस गर्दछु Law & More नेदरल्याण्डमा कुनै पनि कम्पनीमा। "
आपराधिक कानूनको शिकार यो पनि हुन सक्छ कि तपाईं 'पीडित' परिप्रेक्ष्यबाट आपराधिक कानूनको सामना गर्नु भएको छ। आजका दिनहरुमा हामी इन्टरनेट को माध्यम बाट अधिक खरीद गर्छौं। सामान्यतया यो सबै ठीकसँग जान्छ र तपाइँले अर्डर गर्नुभएको कुरा पाउनुहुन्छ। दुर्भाग्यवस, कहिलेकाँही यो गल्ती हुन्छ: तपाईले केहि चीजहरूको लागि धेरै पैसा तिर्नुभयो जुन टेलिफोन वा ल्यापटपमा हो, तर विक्रेताले कहिले पनि सामान डेलिभर गरेको छैन र त्यसो गर्न चाहेको छैन। जे भए पनि, यदि तपाइँ तपाइँको सम्पत्ती कहाँ छन् भनेर सूचित गर्न चाहानुहुन्छ भने, विक्रेता कहिँ भेटिएन। यस्तो अवस्थामा तपाईं आपराधिक घोटालाको शिकार हुन सक्नुहुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा जुन तपाईं दुर्घटनावश आपराधिक कानूनको सामना गर्नुहुन्छ, एक विशेषज्ञ वकिललाई यहाँ सम्पर्क गर्न सल्लाह दिइन्छ Law & More। आपराधिक कानूनको सन्दर्भमा प्रत्येक घटना कठोर हुन सक्छ र आपराधिक कार्यवाहीमा कार्यहरूले एक अर्कालाई द्रुत रूपमा अनुसरण गर्न सक्दछ। मा Law & More हामी बुझ्दछौं कि आपराधिक कानूनको कार्यहरूले तपाईंको जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ र त्यसैले हामी ग्राहकको समस्यालाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्नमा केन्द्रित छौं। मा आपराधिक वकिलहरु Law & More तपाईलाई यी क्षेत्रमा कानुनी समर्थन प्रदान गर्न खुसी छन्: • ट्राफिक आपराधिक कानून; ud ठगी; • कर्पोरेट फौजदारी कानून; • घोटाला।
को आपराधिक कानून वकीलहरूको विशेषज्ञता Law & More
यातायात आपराधिक कानून
के तपाईं रक्सी वा ड्रग्सको प्रभावमा ड्राइभिंग गरेको आरोप लगाइएको छ? हाम्रो कानूनी सहायताको लागि सोध्नुहोस्
के तपाइँ धोखाधडीको अभियोग लगाउनु भयो? हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन सक्छौं
कर्पोरेट आपराधिक कानून
के तपाईं कर्पोरेट आपराधिक कानून मुद्दाहरूको जोखिममा हुनुहुन्छ? हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दछौं
के तपाईलाई स्क्याम गरिएको छ? कानूनी कार्यवाही शुरू गर्नुहोस्
यातायात आपराधिक कानून एक वाहन को चालक को रूप मा तपाइँ खतरनाक व्यवहार बाट अलग रहनु पर्छ। ट्राफिकमा रक्सीको खपत हुँदा त्यस्ता व्यवहारहरू प्रायः त्यस्तै हुन्छन्। तिनीहरू धेरै पिएपछि मानिसहरू नियमित रूपमा कारको पा behind्छा पछाडि हुन्छन्। के तपाईंलाई रक्सीको जाँच पछि पक्राउ गरिएको छ वा तपाईं जरिवाना वा समन प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए आफैलाई विशेषज्ञ वकिलको साथ प्रदान गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। जे भए पनि, मदिराको प्रभावमा गाडी हाँक्नु गम्भीर सजायद्वारा दण्डनीय हुन्छ जुन जेलमा तीन महिनासम्म वा EUR ,,8,300०० सम्म जरिवाना लिन सक्छ र तपाईंले गाडी चलाउने निलम्बन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो सम्भव छ कि सोधपुछको बखत वा मदिरा जाँचको बखत नियमहरू पुलिस र न्यायिक अधिकारीहरूले उल्ल .्घन गरिरहेछन्। यो त्यस्तो अवस्थामा पनि हुन सक्छ कि मदिरा परीक्षणले वैध प्रमाण प्रदान गर्दैन र यसले समाधानलाई समाधान गर्न सक्छ। केहि केसहरूमा, जरिमाना वा सवारी निलम्बन लागू हुँदैन। Law & More यातायात आपराधिक कानूनको क्षेत्रमा विशेषज्ञ वकिल छन् जो तपाईंलाई सल्लाह दिन वा तपाईंलाई प्रक्रियामा सहयोग गर्न खुशी छन्। तपाईं हाम्रो ट्राफिक वेबसाइटमा ट्राफिक र मादक ड्राईभिंगमा खतरनाक व्यवहारको बारेमा थप जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।
धोखाधडी जब तपाईं नेदरल्याण्ड्सको यात्रा गर्नुहुन्छ, तपाईं सीमा शुल्क पार गर्नुहुन्छ। त्यस समयमा तपाईलाई निषेधित सामान बोक्न अनुमति छैन। यदि त्यो मामला हैन भने वा यदि सीमा शुल्क अधिकृतहरूले तपाईंको अज्ञानता वा बेवास्ताको परिणामको रूपमा प्रतिबन्धित सामानहरू फेला पारे, आपराधिक स्वीकृति अनुसरण गर्न सक्दछ। यस देशमा मूल वा तपाईंको राष्ट्रियताको कुनै प्रभाव छैन। सब भन्दा बढी सम्भावित र साधारण स्वीकृति एक जरिवाना हो। यदि तपाईंले जरिवाना प्राप्त गर्नुभयो र तपाईं सहमत हुनुहुन्न भने, तपाईं यसलाई डच सार्वजनिक अभियोजन सेवामा दुई हप्ता भित्रमा आपत्ति गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले तत्काल जरिवाना तिर्नुभयो भने, तपाईंले debtण पावती पनि गर्नुभयो। यसैले यो पहिले तपाईंको अवस्थाको बारेमा एक वकील सल्लाह लिनु महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो वकिलहरूको टोली एक विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त र सल्लाह र सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ कुनै पनि कार्यवाहीमा। तपाईंलाई मद्दत चाहिन्छ वा तपाईंलाई केहि प्रश्नहरू छन्? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More। तपाईं हाम्रो ब्लगमा निषेधित सामान लिने जोखिम र परिणामहरूको बारेमा अधिक जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ: 'डच सीमा शुल्क'।
कर्पोरेट फौजदारी कानून आजकल, कम्पनीहरू बढ्दो अपराधिक कानूनको साथ सामना गरिरहेका छन्। उदाहरण को लागी, यो हुन सक्छ कि तपाइँको कम्पनी गलत कर रिटर्न बनाउन वा वातावरणीय नियमहरु को उल्लंघन गरेकोमा शंका गरीएको छ। त्यस्ता मामिला जटिल छन् र दुर्गम परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ, व्यक्तिगत र व्यवसाय दुबै। यस्तो प्रकारको अवस्थामा चाँडै वकिलको सल्लाह लिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एक विशेषज्ञ वकिलले तपाईको कर्तव्यहरू मात्र दर्शाउँदैन, जस्तै कर अधिकारीहरूलाई जानकारी प्रदान गर्ने कर्तव्य, तर तपाईले सुनिश्चित गर्नु भएको अधिकार (कम्पनीको रूपमा) मौन बस्न पाउने अधिकार जस्ता अधिकारहरूको पनि उल्लंघन हुँदैन। के तपाइँ एक कम्पनीको रूपमा फौजदारी कानूनको साथ व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ र तपाइँ तपाइँको परिस्थितिमा सल्लाह वा कानूनी सहायता चाहानुहुन्छ? तपाईं भर पर्न सक्नुहुन्छ Law & More। हाम्रो विशेषज्ञहरु संग एक पेशेवर दृष्टिकोण छ र जान्दछन् कि कसरी उनीहरुले तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छन। स्क्याम केही परिस्थितिहरूमा तपाईले घोटाला महसुस गर्नुहोला, उदाहरणका लागि जब तपाईले इन्टरनेटमा सामान किन्नु भएको छ, यसको लागि धेरै पैसा तिर्नुभयो र कहिले पनि प्राप्त गर्नुभएन, आपराधिक घोटालाको कानुनी विशेषताहरु बिना। एक घोटाला कानुनी अर्थमा आपराधिक हो भनेर भन्न सक्षम हुन, त्यहाँ असत्य वा झूटा हुनुपर्दछ जुन विक्रेताले केहि बेच्न प्रयोग गर्दछ। घोटालालाई कानुनी रूपमा अर्को व्यक्तिलाई पैसा र सामानहरू वितरण गर्न सारिनुको रूपमा वर्णन गरिएको छ, बदलामा केहि पनि वितरित गर्ने मनसाय बिना। जिज्ञासु छ हामी तपाईंको लागि के गर्न सक्दछौं? हाम्रो वकिलहरु लाई सम्पर्क गर्नुहोस्। Law & More's वकिलहरु को एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण छ र तपाइँको अवस्था र आफ्नो विकल्पहरु को आकलन गर्न सक्छन्।
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ? Law & More आइन्डहोभेनमा कानून फर्मको रूपमा तपाईका लागि गर्न सक्नुहुनेछ? त्यसपछि हामीलाई फोन गरेर सम्पर्क गर्नुहोस् +१ ((०) 31०040 369० st० स्टुउर ईन ई मेल मेल: मि। टम मेभिस, अधिवक्ता Law & More - tom.meevis@lawandmore.nlmr। अधिकतम Hodak, अधिवक्ता & अधिक - maxim.hodak@lawandmore.nl